Waari May Sidee Raad Hakaa Harro! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
“Dadka qaar baa dhintay sharaftooduna ma dhiman, qaarna way nool yihiin ayagoo dadka dhaxdooda ka dhigan kuwa dhintay”
Nabigeenno wuxuu inoo sheegay in dadku labo koox noqon doonnan marki Geeridu timaaddo, mid dhibkiisa laga nastay oo adduunyadu ka nafistay iyo mid hilow iyo gal gaceyl loo qabo wanaagiisa dartii.
Maalmuhu waa warqadaha camalka, waxaana waarra xaaladaha wanaagsan, fursaduhu daruurta camal ayey kuugu marayaan, qofki raaca gaadiidka caajiska inbadan wuu dambbeyn. Hadii ay se kulmaan caajiska iyo dib u dhigidda, waxaa ka dhasho qasaarro aan lasoo koobi karin.
Waxaa jira camallo u haraaya Adoonka Geeridiisa kadib, marki uu katago Dunidaan uu hadda ku nool yahay, waxaa habboon midki wanaag rabbo in uu helo geeridiisa kadib, in uu hadda wax san fallo.
Adoonku haduu dhinto oo ruuxdiisu Rabbigii aaddo, xaggaa iyo Eebbe uu u guurro, wax raaci majiri doonnaan, illaa wixi uu hormarsaday inti uu noolaa mooyee, bogaadin ayaa u sugnaatay hadii uu wax san hormarsaday, kheyr weyn ayuuna ku liibaanay,balse shalayto iyo halaak ayuu la kulmi, hadii uu ahaa mid raaca naftiisu waxa ay fasho, kaa sinne wuu hoogay wuune qasaaray, naftiisana wuu dayacay.
Ana’s bin Malik wuxuu wariyey, in Nabigu NNK uu yiri: “Meeydka sadax ayaa raacdda, labo ayaana soo laabata, halka midne ku hara, Ehelkiisa iyo Hantidiisa iyo Camalkiisa ayaa raaco deedne Hantidiisa iyo ehelkiisuba wey soolaabtaan, camalkiisune wuu ku hari”.
Cumrigu waa mid is xig-xiga, ajashune waa mid la qeybiye,midkastane waxaa loo qoray qeybtii uu dunidaan kulahaa.
Waxaa su’aal mudan! in aad is weydiiso Maxaad fashay noloshaadii? miyaad u nooleed in aad cimriga is dhaafiso kuna fasho nafta samaan iyo xumaan wixi u fududaaday? Ama sa waxaad e heed mid samaha kataliya oo raad wanaagsan reebtay inti uu noolaa.
Geeridaada dabadeed maxaa raad ah oo reebi doontaa?
Maxey tahay camalada suuban ee laguugu xasuusan doonna geeridaada debadeed?
Imisa qof ayaa wax bartay?
Imisa baadiyeysan ayaa wadada suuban ku hagtay?
Imisa geed ayaa dhulka ku beetray?
Imisa xadiith oo rasuulka ka sugnaatay ayaa dadka gaar siisay oo bartay?
Dadka qaar baa dhintay sharaftooduna ma dhiman, qaarna way noolyihiin ayagoo dadka dhaxdooda ka dhigan kuwa dhintay.
Imam Raafici wuxuu dhihi jiray “Hadii aadan aduunkaan waxne ku soo biirin, og soonow in adigu aad saa’id ku tahay. In badan oo dadka kamid ahi waxey ka gaabsheen, in ay dacwadda alle ay faafi yaan, waxeyne maleeyeen faafinta dacwadda in ay waajib ku tahay dadka culumadda ahi, hadii arin kaa ay dhab ahaan laheed, islaamku wuu dayacmi lahaa, ee inti ay geeridu kuu imaanin waxaad hormar sataa camallo geeridaada gadasheed ku anfici doonna.
Qofki geeri u timaaddo wuxuu ka guuray daarti lagashaqey sanaaye, wuxuuna aaday Daarti abaal marinta iyo isla xisaabinta
Tags: Waari May Sidee Raad Hakaa Harro!
Next post Qofkii ii Jeedda Yuusan Dulmi Sameynin!
Previous post Dameerkii Doqonka Ahaa iyo Libaaxii Xeeladda Badnaa